Donald Trump: "Tallaal la helyaa iyo la waayaaba xayiraadda iyo bandowga waan qaadayaa' - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDonald Trump: “Tallaal la helyaa iyo la waayaaba xayiraadda iyo bandowga waan qaadayaa’
Washington (JO) – Madaxweynaha Mareykanka Donadla Trump ayaa sheegay in Mareykanka xayiraadda iyo bandowga laga qaadayo haddii ‘talaal la helo iyo haddii la waayaba’, isaga oo intaa ku daray inuu rajeeynayo in cudurka coronavirus tallaal looga hortago la soo saarayo dabayaaqada sanadkan.
Dadaallada mashaariicda dawo iyo tallaal looga raadinayo coronvirus ayaa Trump uu ku maseeyey dadaalka loo galay dagaalkii labaad ee adduunka uu Mareykanka u galay inuu qunbuladdii ugu horreeysay oo Niyuukilar ah uu sameysto.
Wuxuuna madaxweyne Trump uu si cad u sheegay xataa haddii cudurkan safmarka dawo loo waayo, Mareykanka looga baahan yahay inuu billaabo sidi ay noolasha caadigeeda ugu soo noqon lahayd.
Khubara badan waxay shaki ka muujiyeen sida uu madaxweynaha sheegay in sanadkan gudahii Covid-19 tallaal loo helo.
Muxuu yahay mashruuca xawaaraha ku socda?
Madaxweyne Trump oo Jimcihi Aqalka Cad shir jaraa’id ku qabtay ayaa sheegay mashruuca uu yahay 14 dawo oo rajo aad u wanaagsan laga muujiyey oo ay u hadhsan tahay cilmibaaris iyo anisixin.
“Waa arrin aad u weyn oo weliba degdeg ah” ayuu yiri mar uu Trump shaaca ka qaadayey mashruuca xawaaraha ku socda. “Aqoon Saaynis oo ballaaran, warshado ayaa ku dadaalaya wax kasta oo uu waddankeenu uu u arko inuu mashruuca ku hirgelayo.”
Mr Trump mashruucaasi iney hoggaamiyaan wuxuu u magacaabay Jeneraal Militari iyo madaxii hore ee daryeelka caafimaadka, waxaa sidaa oo kale soo saaridda dawada iyo baahinteedana iska kaashan doono dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Moncef Slaoui, oo horay u hoggaaminayey qaybta dawooyinka ee shirkadda weyn ee soo saarto dawooyinka ee GlaxoSmithKiline, ayaa hoggaaminaya howlgalkan coronavirus dawada looga baadi goobaya, halka u Jeneral Gustave Perna, oo miitariga Mareykanka ka tirsan ayaa sida oo kale hoewlgalkaasi door hoggaamined ku yeelan doono.
Mr Slaoui oo Trmp kaddib hadalka qaatay wuxuu sheegay ‘inuu ku kalsoon yahay’ “boqollaal milyan oo dawo ah” iney soo saari doonaan dabayaaqada sanadkan.
Wuxuu sida oo kale uu ka hadlay wareysi uu siiyey wargeyska New York Times uu ku sheegay wakhtiga inta badan la qabsado inuu yahay rajo oo keli ah, wuxuuna intaa ku daray “inuu hadda waxba ballan qaadi karin ilaa guusha kama dambeysta la gaaro”.
Maxaa kale uu madaxweyne Trump sheegay?
“Anigu ma doonayo dadku iney ku fikiraan ku tiirsanaanta dawooyinka,” ayuu yiri. “Dawo la helyaa iyo dawo la waayaaba, waddanka sidiisa ayaan ku soo celineynaa tillaabbooyinkaasina wan billaabeynaa.
“Waxay ila tahay in iskuulada dib loogu laabanayo xilliga dayrta” ayuu yiri Mr Trump oo hadalka sii wato.
Horraanti toddobaadkanna Dr Anthony Fauci, oo ka mid ah guddiga qaran ee coronovirus oo xirana maaskarada afka iyo sanka lagu xirto oo shir jaraa’id ku qabtay Aqalka Cad wuxuu sheegay iskuullada in la furi doono xilliga deyrta.
Madaxweynaha oo warbaahinta la hadlayey oo aan xirneen maaskarada sanka iyo afka lagu xirto ayaa gabar ka mid ah wariyeyaasha uu u warramayey ku amray iney maaskarada iska furto si codkeeda uu usi wanaagsan ugu maqlo.
Dhammaadka 2020 ma yahay xilli macquul ah?
Dr Fauci iyo khubara kale waxay soo jeediyeen in talalalka lagula tacaalo coronovirus oo la soo saaro ay qaadaneyso ugu yaraan hal sano.
Xilliga uu cudurka Ebola dilalacay intii u dhaxeysay 2014-16, hay’adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka maamusho dawadi ugu horreysay waxay ansixisay 2019-ka.
Qaar ka mid ah khubarada caafimaadku waxay shaki aad u weyn ay ka muujiyeen jadwalka degdegga ah ee dawada lagu helayo laguna soo saarayo ee aqalka cad looga dhawaaqay.